क्यानकाे एक वर्ष – धरासायी बन्ने बाटोमा क्रिकेट - Khelpati
क्यानकाे एक वर्ष – धरासायी बन्ने बाटोमा क्रिकेट
क्यान निर्वाचनमा मतदान गर्दै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द । फाेटाे : खेलपाटी
काठमाडौं । एक वर्ष अघि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को साधारण सभा हुँदै गर्दा आम समर्थक एकदमै उत्साहित थिए ।
क्यान आईसीसीको निलम्बनमा थियो । अभिभावक संस्था नहुँदा घरेलु क्रिकेट अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सिमित थियो । खेलाडीको उत्पादन, विकास र प्रर्दशनको चक्र बन्द जस्तै रह्याे ।
क्यानको साधारण सभा सबै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक थियो । व्यक्ति जो आएपनि क्यान पुर्नस्थापित हुँदै थियो । आईसीसीले लिएको नेपाली क्रिकेटको लगाम देशमा फर्कदै थियो । विवाद, संवाद र समाधानका झण्डै चार वर्षे उद्धेश्यहिन यात्रा पार गर्दै क्यान सही ‘ट्रयाक’मा आउने विश्वास राखिएकाे थियो ।
क्यानको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका दुवै समूहलाई थाहा थियो, जितेर आएपनि क्रिकेट चलाउन सजिलो हुने छैन ।
क्यान चलाउन फलामको च्यूरा हुनेमा दुवै पक्ष जानकार थिए । सरकार समर्थित समूहलाई पराजित गर्दै क्यानको नेतृत्वमा आएका चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको समूहकालागि चार बर्षको कार्यकाल चुनौतीका चाङ्गले भरिएका थियो ।
तर जुन मर्म र उद्धेश्यका साथ क्यानमा नयाँ नेतृत्व आएको थियो । त्यो गतिमा सुरुवाती दिनबाट ‘ब्रेक’ लाग्न सुरु भयाे । विगत एक वर्षलाई फर्किएर हेर्दा क्यानसंग कामको प्रगति भन्दा गर्न नसकिएका ‘रेडीमेड उत्तर धेरै छन् । कोभिड–१९ लाई कारण देखाएर क्यान निर्वाचनकाे मितिदेखिनै ‘क्वारेन्टिन’मा बसेको जस्तो देखिन्छ । संघभित्रका जटिलता समाधानमा नेतृत्वले पहल नगर्ने हो भने क्रिकेट ‘कोमा’मा जाने देखिएको क्रिकेटका सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा जेठो संस्था क्याननै व्यवस्थापकीय, प्रशासनीक, प्राविधिक र गतिविधिका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर छ । क्यानले संस्थागत ईतिहास हेरेर समिक्षा गर्दा वर्तमान नेतृत्वले गर्दैछौ, हुदैछ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर नेपाली क्रिकेट चल्ने देखिदैन । वितेको एक वर्षमा क्यानको नेतृत्वले नेपाली क्रिकेटको कहाँ पुर्याउने भन्ने स्पष्ट चित्र समेत दिन सकेन ।
घरेलु क्रिकेटका पण्डितहरु भन्छन्, ‘क्यान खराब अवस्थाबाट धरासायी बन्ने बाटोमा प्रवेश गर्दैछ ।’
यसका केही खास खास कारणहरु छन् ।
असोजको पहिलो साता चितवनमा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको रुपमा प्रधानमन्त्री कप गर्ने निर्णय गर्यो । सबैलाई थाहा छ, पीएम कप राखेपको कार्यक्रम हो । तर क्यानले आगामी मंसिरभित्र पीएम कप गर्ने निर्णय गरेको छ । राखेपसंग दुरी राख्दै आएको क्यान एक्कासी राखेपकै कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा किन पुग्यो त ?
क्यानका एक सदस्य भन्छन्, यसको मुख्य कारण आर्थिक हो । क्यान चरम आर्थिक संकटमा छ । खाता लगभग शुन्य छ । बजेट नभएपछि क्यानले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन । बरु राखेपकै प्रतियोगितालाई वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने अवस्थामा पुगेकाे हाे ।
पछिल्ला एक वर्षमा क्यानले कुनै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकेन ।
प्रतियोगिता भए पो प्रायोजक ।
प्रायोजक भए पो आम्दानी ।
क्यानका प्रतियोगिता, प्रायोजक र आम्दानी शुन्य जस्तै छ । चुस्त समन्व्य गर्न नसक्दा कार्यक्रममा आधारित अनुदान आईसीसीबाट ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा क्यान आर्थिक संकटमा छ ।
आईसीसीसंग समन्व्यको अभाव
वर्तमान कार्यसमिति कुनै समय आईसीसीबाट प्रतिबन्धित संस्था हो । बित्तिय अनुशासनलाई कायम राख्ने शर्तमा आईसीसीले क्यानमाथि आंशिक फुकुवा गरेको छ । तर क्यानको स्वतन्त्रतामा आईसीसीको अंकुश यथावत छ । पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि क्यानले प्रशासनीय र वित्तिय संरचनामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । जसकालागि क्यान कछुवा गतिमा प्रयासरत जस्तो देखिन्छ ।
क्यान र आईसीसीको सहमती हो, कार्यक्रममा आधारित अनुदान । यसको अर्थ आईसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान अब एकैपटक आउदैन । क्यानले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम पास भएको खण्डमामात्र आईसीसीले पैसा पठाउँछ । त्यसैले हरेक कार्यक्रमका लागि आईसीसीका कर्मचारीसंग ‘डिल’ गर्नुपर्ने बाध्यता क्यानलाई छ । यसले गर्दा आफुहरुले गर्ने हरेक कार्यक्रमको प्रक्रियाले समय लिने गरेको क्यानका अध्यक्ष चन्द बताउँछन् । क्यानप्रति आईसीसीको सम्बन्ध हार्दिक छैन । त्यसैले क्यानमाथि पुरा विश्वास आईसीसीले गरेको देखिदैन । यही अविश्वासको असर क्यान र नेपाली क्रिकेटमा यथावत छ ।
घरेलु क्रिकेटको कार्यकारी निकाय हो, राखेप । तर राखेपसंग क्यानको सम्बन्ध पछिल्लो एक बर्षमा पनि बन्न सकेन । राखेपको नेतृत्वमा रमेश सिलवाल हुदाँ अझ सम्बन्धमा जटिलता पैदा भएकाे छ ।
सिलवाल तीनै व्यक्ति हुन्, तत्कालिन क्यानलाई भंग गर्दै सरकारले गठन गरेको क्यानको तदर्थ कमिटिमा सिलवाल संयोजक थिए । आफुहरुविरुद्ध निर्वाचनमा समेत खेलेका कारण वर्तमान क्यानका पदाधिकारीले राखेपसंग सम्बन्ध बनाउन आँट गर्न सकेका छैनन् ।
१३ औं सागको दौरान विभिन्न खेलकुद संघले राखेपको सहयोगमा धेरै पूर्वाधार र सहयोग जुटाए । तर क्यानले शुद्ध प्रतियोगिता बाहेक राखेपसंग कुनैपनि संस्थागत फाईदा उठाउनै सकेन । राखेप सदस्य सचिव सिलवाल र क्यानको वर्तमान नेतृत्वबीच हार्दिक सम्बन्ध छैन । त्यसको असर नेपालको क्रिकेट विकासमा देखिएको छ ।
क्यान र खेलाडीबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । एक समय वर्तमान नेतृत्वसंग खेलाडीको वारपारको अवस्था थियो । पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा क्यान बिनै नेपाली क्रिकेटरले अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफुलाई स्थापित र प्रमाणीत गरेका छन् । एकदिवसीय मान्यता प्राप्त हैसियतका खेलाडीको व्यवसायीकता क्यान भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ ।
प्रायोजक खोजेर वर्षको करोडौ कमाउने क्रिकेटर यही छन् । विदेशी लिग खेलेर लाखौ डलर खेलाडीले कमाएका उदाहरण छन् । तर खेलाडी र क्यानबीचको सम्बन्ध अझपनि ज्यूँका त्यूँ छ । आफुलाई व्यवस्थापन गर्ने नैतिक र व्यवस्थापकीय क्षमता क्यानका पदाधिकारीले राख्न नसक्ने खेलाडीहरु ठान्छन् ।
उदाहरणका लागि क्यानको निर्वाचन लगत्तै पारस खड्काले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिए । वर्तमान क्यानको कप्तानको रुपमा नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट सन्देश थियो ।
पारस मात्र हैन, अधिकांश राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटरलाई क्यानसंग स्पष्ट योजना, क्षमता र जवाफदेहिता छैन भन्ने लाग्छ । वितेको एक वर्षमा क्यानले न त खेलाडीलाई विश्वासमा लिन सकेको छ, न त खेलाडीको धारणा बदल्न प्रयास गरेको छ । वर्तमान नेतृत्वले समेत खेलाडीको जगडिएको धारणालाई बदल्न कोशिश गरेका छैन ।
बरु खेलाडी संघ (सीप्यान) दर्ता गरेर क्रिकेटरले सक्रिय रुपमा चुनौती दिईरहेको क्यानको आरोप छ । क्यानको वर्तमान नेतृत्व समेत सीप्यानलाई आफ्नो समानान्तर चुनौती दिने संस्थाको रुपमा लिन्छ । त्यसैले पनि क्यानले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा सीप्यानलाई खेलाडी संघको मान्यता दिएको छैन ।
क्यानको वर्तमान नेतृत्व, सरकार र आईसीसीसंग लामो संघर्ष गर्दै स्थापित भएका होे । सरकारले मान्यता नदिदा, आईसीसीले प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत वर्तमान नेतृत्वलाई स्थापित गर्न धेरै व्यक्ति र समूहले सहयोग गरे । क्यानको वर्तमान नेतृत्वलाई निर्वाचनमा केहीले देखिएर सहयोग गरे, केहीले अदृष्य रुपमा ।
निर्वाचनमा वर्तमान कार्यसमितिले क्लिन स्विपनै गर्यो । सरकार समर्थित समूहलाई पराजित गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सहयोग गरेका केही अदृष्य शक्ति निर्वाचनमा निर्णायक थिए । तीनै शक्ति अहिलेपनि नेपाली क्रिकेटमा हावी हुन खोज्छन्, हिस्सेदारी माग गर्छन् । आफ्ना मान्छेलाई क्रिकेट राजनीतिमा स्थापित गर्ने चाहना राख्छन् ।
बाहिर मात्र नभएर क्यानभित्र समेत विभिन्न समिकरणहरु छन् । नेतृत्वका हिसाबले चतुरबहादुर चन्दले जितेपनि क्यानभित्र उनी कमजोर देखिन्छन् । अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र उनीहरु समर्थित जिल्ला एकातिर छन् । सचिवसंग आफु सहित सहयोगी जिल्लाको बेग्लै समूह छ । क्रिकेट राजनीतिमा काठमाडौं केन्द्रित जिल्ला र क्यान बाहिर रहेका शक्तिले फरक फरक समूह बनाएका छन् । सुदुरपश्चिमको बैतडीमा बस्ने अध्यक्ष, पूर्वको महोत्तरीमा बस्ने कोषाध्यक्ष र काठमाडौंमा बस्ने सचिव बीच संयोजन मिलाउन चितवनमा बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले क्यानले गतिविधिलाई नराम्ररी असर गरिरहेको छ ।
असोजको दोस्रो साता क्यानमा नयाँ नेतृत्व आयो । सोही महिनाको अन्तिम साता क्यानलाई आईसीसीले शसर्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । नेपालमा घरेलु क्रिकेटको सिजन असोजदेखि चैत बैशाखसम्म हो । तर क्यानले सो समयमा कुनै राष्ट्रिय तथा उमेर समूहका प्रतियोगिता आयोजना गरेन । बजेट त थिएन तर समयमै आईसीसीमा प्रस्ताव पनि गएन ।
असोजमा निर्वाचित भएको क्यानले कात्तिकमा प्रतियोगिता सहितका खाका कोर्ने समिति बनायो । वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर आईसीसीमा प्रस्ताव गर्दा गर्दै कोरोना कहरले छोपिहाल्यो । प्रतियोगिताको घोषणा गर्न निकै ढिला भैसकेको थियो । क्यानले प्रयोजक खोजेर आफैले घरेलु प्रतियोगिताको ढोका खोल्ने जाँगर चलाएन ।
आईसीसीलाई कन्याउँदै वर्ष बितेपछि कोरोना कहरलाई देखाएर पदाधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्दैछन् ।
काेराेनाकाे प्रभाव कहिलेसम्म रहने टुङ्गो छैन । सन् २०२२ सम्म रहेको नेपालको एकदिवसीय मान्यतालाई कसरी संस्थागत गर्ने प्रष्ट योजना र कार्यक्रम छैन । कोरोनाले राष्ट्रिय टिमले खेल्ने सिरिजहरु प्रभावित छन् । राष्ट्रिय टिमलाई मैदानमा कहिले उतार्ने क्यानसंग योजना छैन । कोरोना कहरका बीच क्रिकेटलाई अघि बढाउने बिषयमा नेतृत्व आफै रनभुल्लमा छ । जसले गर्दा क्रिकेट थप धरासायीको बाटोमा अग्रसर देखिन्छ ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान एलबी क्षेत्री निर्वाचनको मर्म र उद्धेश्य अनुसार क्यानको वर्तमान कार्यसमितिले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन ।
वर्तमान नेतृत्व चुनौतीका साथ क्यानको जिम्मेवारीमा आएको उल्लेख गर्दै उनले क्रिकेटको गम्भिरतालाई बुझेर काम नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
‘क्यान जुन मर्म र उद्धेश्यका साथ आयो । त्यो गतिमा अघि बढ्न सकेन ।’ उनले भने, ‘वर्तमान नेतृत्व चुनौतीका साथ आएको हो । उसले पहिलो दिनबाट काम गर्न पर्दथ्यो । बिषयको गम्भिरतालाई बुझेर काम नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।’
क्रिकेट विवाद समाधान गर्न आईसीसीको विशेष समितिमा समेत रहेका क्षेत्रीले क्यानको नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्यबारे भरोसा दिलाउन नसकेको बताए ।
‘क्रिकेटलाई कति वर्षमा कुन स्तरमा लैजान ? हाम्रो लक्ष्य के हो ? भन्ने विषयमा नेतृत्वले भरोसा दिलाउन सक्नुपर्दथ्यो । दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति र कार्यक्रमनै प्रस्ट भएन ।’ उनले थपे ।
इंग्ल्यान्डको दक्षिण अफ्रिका भ्रमण पक्का
राजस्थान र हैदराबाद भिड्दै
कोलकत्तामाथि बैंगलोरको सहज जित